I-Jamaica Tourism ne-Grupo Pinero: Izingxoxo Ezikhethekile Zokutshalwa Kwezokuvakasha Kwezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJamaica » I-Jamaica Tourism ne-Grupo Pinero: Izingxoxo Ezikhethekile Zokutshalwa Kwezokuvakasha Kwezokuvakasha
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • I-Caribbean • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba
UNgqongqoshe Wezokuvakasha waseJamaica kanye nabaphathi beGrupo Pinero
UNgqongqoshe Wezokuvakasha wase-Jamaica, uMhlonishwa. U-Edmund Bartlett (obonwe maphakathi esithombeni) umisa kancane isithombe nabaphathi be-Grupo Piñero: I-CEO, u-Encarna Piñero (kwesokunxele); kanye nePhini Likamongameli, i-Quality & Innovation, u-Lydia Piñero.
Lo mcimbi bekuwumhlangano okhethekile phakathi kukaNgqongqoshe u-Bartlett, izikhulu eziphezulu zoMnyango Wezokuvakasha kanye nezinhlangano zawo zomphakathi, kanye nethimba labaphathi abakhulu be-Grupo Pinero.
UGrupo Pinero ungumnikazi we-Bahia Principe Runaway Bay, ihhotela elikhulu kunawo wonke e-Jamaica elinamagumbi angu-1,375.
Inxusa laseSpain e-Jamaica, uMhlonishwa u-Diego Bermejo Romero de Terreros, naye ubekhona.
UGrupo Pinero ungumnikazi futhi usebenza izindawo zokungcebeleka ezingu-27 emhlabeni wonke ezinamakamelo angaphezu kuka-14,000. Inkampani i e-Jamaica, njengoba kuhlelwa ukunwetshwa.
Uphiko Lwezokuxhumana Lwenkampani
Umqondisi Omkhulu, Wezokuxhumana Kwebhizinisi
Ucingo: 920-4926-30, ext.: 5990